Xog aadan ogayn oo kasoo baxaysa Xildhibaankii saaka lagu feeray Aqalka Wakiillada Somaliland | Hadalsame Media
Home Maqaallada Xog aadan ogayn oo kasoo baxaysa Xildhibaankii saaka lagu feeray Aqalka Wakiillada...
Xog aadan ogayn oo kasoo baxaysa Xildhibaankii saaka lagu feeray Aqalka Wakiillada Somaliland
(Hadalsame) 15 Jan 2022 – Xildhibaan Maxamed Abiib Yuusuf oo caan ku ah magaca ”Xidhibaan Ooyaaye”, ayaa ka mid ah laba xildhibaan oo saaka uu gacan ka hadal ku dhexmaray Baarlamanka Somaliland gaar ahaan Aqalka Wakiillada, waxaana gacan qaadka lagu bilaabay Abiib oo markiiba isaga la qabtay.
MUXUU U DOODAYEY ABIIB? Ninkaan dhallinyarada ah waa ninka keliya ee in yar oo faham ah ka haysta shaqada xildhibaanka ama wakiilka, guud ahaan geyiga Soomaalida.
Tusaale ahaan saaka waxa uu G. Wakiillada Somaliland ka sheegay in ay gef tahay in miisaaniyadda duuduub lagu ansixiyo ayada oo aan la is waydiin waxtarmaadka sida miisaaniyadda loo qoodeeyay.
Waxa uu tusaale u soo qaatay gadiidka dawladda Somaliland ee aan diiwaangashanayn in la diiwaangeliyo si loogu jaangooyo qoondada miisaaniyadda dalka.
Wuxuu sidoo kale u doodayey in si loo ogaado shaqada gaadiidku qabto iyo shidaalka faraha badan ee lagu isticmaalo kaas oo dhiigbax ku ah dhaqaalaha Maamulka Somaliland.
Laakiin nasiiba darro sidii caadada ka ahayd Soomaalida looma joojin. Weliba feer iyo laad baa la la dhacay.
In muddo ah ayaan si gaar ah ugu fiirsanayay doodaha Mr. Abiib iyo docaha uu wax ka eegayo, waa nin waaqici ah ogna halka wax ka khaldan yihiin.
FG: Qoraal kasta waxay ka tarjumayaa aragtida qoraha ku saxiixan
W; Q: Cali M Diini
Previous articleSomalia & Imaaraadka oo iska kaashaday arrin aysan Soomaali badani wacaal u haynin (Maxaa dhacay?)
Next articleMoowjado culus oo sunaami ah oo kusoo wajahan dalalka Japan & Maraykanka (Dhererkooda)